Archives Vaovao farany momba ny vatsim-pianarana - Vaovaom-pianarana ankehitriny: vaovaon'ny sekoly ankehitriny
Fanavaozana ny vatsim-pianarana
Filed in Fanavaozana ny vatsim-pianarana by TMLTStaff tamin'ny Jolay 23, 2021	• 0 Comments
Manaiky ny fangatahana vatsim-pianarana MSc sy PhD avy amin'ny olom-pirenena vahiny 2021/2022 ny governemanta Colombia. Jereo ny antsipiriany misimisy momba ny mpitondra fanjakana Kolombia sy ny vatsim-pianarana PhD 2021. Ny Governemanta any Kolombia dia manolotra vatsim-pianarana ho an'ireo teratany vahiny liana amin'ny fanaovana fandaharam-pianarana manokana, Masters ary PhD any Kolombia. Fanomezana ara-bola natolotra ny olom-pirenena vahiny izy ireo, ho takalon'ny […]
Filed in Fanavaozana ny vatsim-pianarana by TMLTStaff tamin'ny Jolay 23, 2021
Mpianatra Goodnews mitady fanampiana ara-bola. Ny oniversite anglisy an'ny Exeter dia faly manolotra vatsim-pianarana Undergraduate Global Excellence ho an'ireo mpianatra mahay. Manomboka amin'ny septambra 2021 ny fianarana. Jereo ny antsipiriany momba ny fomba fampiharana eto ambany. Ny programa dia misy ho an'ireo mpianatra mandoa saram-pianarana iraisam-pirenena miavaka izay hisoratra anarana amin'ny fidirana amin'ny taona voalohany manomboka ny fianarana amin'ny volana septambra 2021. Amin'ny maha iray […]
Fanolorana vatsim-pianarana Rotary Foundation 2021 ho an'ny fampandrosoana.
Filed in Fanavaozana ny vatsim-pianarana by Staff editorial tamin'ny Jolay 22, 2021	• 0 Comments
Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava amin'ny antsipiriany aho, ny fomba fangatahana Rotary Foundation Global Scholarship 2021. Hanampy anao hahalala ny zava-drehetra aho amin'ny fanaovana ny fanazavako ho tena tsotra. Mifantoha ary vakio. Ny Rotary Foundation dia manolotra famatsiam-bola amin'ny alàlan'ny Rotary Foundation Global Grants. Ny vatsim-pianarana dia mamatsy vola asa any an-tsekoly na fikarohana momba […]
Vatsim-pianarana momba ny mari-pahaizana eran'izao tontolo izao 2021 ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena
Filed in Fanavaozana ny vatsim-pianarana by Staff editorial tamin'ny Jolay 22, 2021
Raha te hivoatra amin'ny lafiny akademia sy matihanina ianao nefa tsy manam-potoana sy vola hanohizana fampianarana manontolo andro, dia ny fampiofanana na fampianarana fohy fotsiny no ilainao. Ireto ambany ireto dia vatsim-pianarana 10 manerantany ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena 2021. Eo amin'ny lafiny fanatsarana ny vintana amin'ny fangatahana vatsim-pianarana sy ny asa, ny fanaovana fampianarana fohy […]
Vatsim-pianarana ambony amin'ny oniversite ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena 2021
Filed in Fanavaozana ny vatsim-pianarana by Editorial an'ny TMLT tamin'ny Jolay 21, 2021
Homena anao ny lisitr'ireo vatsim-pianarana anjerimanontolo ambony indrindra ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena 2021. Tsy mitovy amin'ny zavatra mety ho hitanao any an-kafa izany amin'ny vatsim-pianarana ambony eny amin'ny oniversite. Ny maha samy hafa azy dia, raha ny vatsim-pianarana sasany eny amin'ny anjerimanontolo dia ho an'ny mpianatra manana ny zom-pirenenan'izy ireo ihany no firenena misy oniversite […]
Nizeria LNG vatsim-pianarana voafetra 2021/2022 Fanavaozana ny vavahadin'ny mpianatra
Filed in Fanavaozana ny vatsim-pianarana by TMLTStaff tamin'ny Jolay 21, 2021	• 0 Comments
Nizeria LNG Limited (NLNG) dia manasa ny fangatahana avy amin'ny mpianatra taona voalohany liana amin'ny anjerimanontolo Nizeriana, ho an'ny loka LNG Limited Limited Award. Jereo ny antsipiriany misimisy etsy ambany; Ity tetik'ady ity dia mikendry ny hampiroborobo ny fahaizan'ny akademika amin'ny alàlan'ny fanohanana ireo mpianatra ambaratonga ambony amin'ny alàlan'ny andrim-pampianarana ambony. Ny fangatahana dia asaina ho an'ny: LNG LNG nahazo mari-pahaizana momba ny vatsim-pianarana voafetra 2021 Criteria ho an'ny loka Manana fahombiazana / tena […]
Canada Graduation Scholarship (CGS) Fanavaozana ny fampiharana 2021
Ny vatsim-pianarana nahazo diplaoma Canada 2021 dia fotoana lehibe ho an'ny mpianatra maoderina. Ary raha mpianatra Phd ianao dia natao ho anao izany. Vakio manontolo ary ampiharo. Aza hadino anefa fa mahafeno ny fepetra takiana ianao. Momba ny vatsim-pianarana Vanier Canada Graduation (CGS) Ity vatsim-pianarana nahazo diplaoma any Canada (CGS) 2021 ity dia nambaran'ny governemanta kanadiana. Ary natao ho an'ny […]
Ampiharo izao amin'ny Jumia Summer Internship Program 2021
Filed in Vaovao, Fanavaozana ny vatsim-pianarana by Staff editorial tamin'ny Jolay 21, 2021	• 0 Comments
Ny Jumia Summer Internship Program dia natao hisarihana ny mpianatra ambony amin'ny Oniversite any Nizeria sy manerana an'izao tontolo izao. Ny tanjon'izy ireo dia ny manampy amin'ny famolavolana ny fifindranao manomboka amin'ny mpianatra mankany amin'ny matihanina amin'ny orinasa. Jumia no mpilalao e-varotra lehibe atsy Afrika. Niorina tamin'ny 2012 tany Nizeria, ny tanjon'i Jumia dia ny fanavaozana ny foto-kevitry ny fiantsenana […]
Fanabeazana ho an'ny Commonwealth PhD vatsim-pianarana 2021 fanavaozana
Nanyang Technological University (NTU) dia izao manasa ny fangatahana vatsim-pianarana Commonwealth ara-bola any Singapore izao. Ity vatsim-pianarana ity dia natao ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena izay tsy olom-pirenena Singapore na mponina maharitra. Ny drafitry ny vatsim-pianarana Commonwealth and Fellowship Plan (CSFP) dia iray amin'ireo tetik'asa lehibe indrindra sy malaza indrindra amin'ny fianarana iraisam-pirenena manerantany. NTU […]
Arizona Scholarships 2021/2022 Fanavaozana ny vavahady fampiharana
Manontany tena ve ianao raha misy vatsim-pianarana any Arizona? Na, inona no azonao ampiasaina amin'ny vatsim-pianarana? Raha eny dia diniho tsara izany. Ny vatsim-pianarana Arizona dia misy. Ary azo ampiasaina amin'ny famoronana fanampiana ara-bola. Ary izany dia hampihenana ny vidin'ny oniversite. Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny vatsim-pianarana Arizona. […]